ဆရာမလေးကွညျပွာ – My Blog
ဆရာမ နာမညျက ကွညျပွာ..ကတြော့တို့ရှာကို လာပွီး မူလတနျးကိုလာရောကျစာသငျပေးသော..ရပျရှာခနျ့..ဆရာမ.တဈယောကျဖွဈပါသညျ။ကတြော့ အိမျခေါငျးရငျးအိမျမှာ နထေိုငျရနျ ရပျရှာက သတျမှတျထားပါသညျ။ဆရာမကွညျပွာက. အသားကဖွူဖွူ…အရပျကနဲနဲပုတယျ…ရယျလိုကျရငျ ပါးခြိုငျ့ လေးခှကျပွီး ..သှားလေးတှကေ ဖွူဖှေးနတောပဲ…ဆရာမဝတျစုံလေးဝတျလိုကျရငျ..အရမျးကို ကကျြသရရှေိ လှပတဲ့သူပါ…လှမျးလြှောကျရငျလညျး..ညငျ ညငျသာသာလေး လှမျးလြှောကျတကျပွီး…ဘေးတိုကျတုနျခါတဲ့..တငျသားမြားမဟုတျဘဲ…အပျေါအောကျ..လှုပျခါနတေဲ့ တငျသားမြားကို ပိုငျဆိုငျသူလညျး ဖွဈပါသညျ။
သူနဲ့အရမျးမရငျးနှီးပမေယျ့လညျး…ကတြော့အတှကျမှနျးထုစရာ..စိတျကူးရငျ မငျးသမီးတယောကျဖွဈပါသညျ။.မှနျးထုစရာ အကွောငျးအရာတှကေလညျး ရှိတယျလေ…မိုးလငျးလို့ သေးပေါကျရငျ အိမျသာပျေါမတကျပဲ…အိမျသာရှမှေ့ာ..ထမိနျလှနျသေးပေါကျခွငျး၊ရခြေိုးရငျ သူနတေဲ့အိမျခွရေငျးမှာ ခြိုးတကျ ခွငျး၊ဗှီဒီယိုကွညျ့ပွီးပွနျလာရငျ ရခြေိုးတဲ့နရောလေးမှာပဲ…ထမီလှနျ ဓာတျမီးထိုးသေးပေါကျခွငျးတို့ဟာ..ကတြော့အတှကျ ဆရာမကိုမှနျး…. ဂှငျးထုခွငျး ကိုဖွဈစခေဲ့တာပေါ့…..အဲဒီအထဲကမှ..ကတြျော…ဂှငျးထုအရသာအရှိဆုံးက..မနကျရခြေိုးခြိနျနှငျ့ညနရေခြေိုးခြိနျပဲ…ဆရာမကွညျပွာ ရတေခါခြိုးလြှငျ အခြိနျတျောတျောကွာတယျ..နှံစပျအောငျလညျးတဈကိုယျလုံးပှတျ ခြေးတှနျးတယျ….ဆရာမကွညျပွာရခြေိုးတဲ့နရောက ကတြော့အခနျးရဲ့ခေါငျးရငျး ဘကျ…သူနတေဲ့အိမျရဲ့ခွရေငျးဘကျကတြာပေါ့….တောရှာတှဆေိုတော့..ရခြေိုးခနျးအကာတှေ..ဘာတှေ..မရှိဘူး..ရာဝငျအိုးနှငျ့အဝတျလြှျောစရာသဈသား တဈတုံးပဲရှိတယျ..ကတြျောကဆငျးရဲတော့ ..ဝါးထရံကာအိမျလေးနဲ့ပဲနနေိုငျပါတယျ…ခြောငျးကွညျ့ဖို့အတှကျ အဆငျတော့ပွတေယျ…
ဆရာမကွညျပွာရခြေိုးမယျ..မွငျလိုကျတာနဲ့..ကတြျောအခနျးထဲပွေးဝငျတော့တာပဲ… ဆရာမရခြေိုးရငျထမီအပိုတထညျကိုဘယျဘကျလကျဖြံပျေါ တငျ..ညာလကျကဆပျပွာခွငျးကိုကိုငျပွီး..ရခြေိုးတဲ့နရောကိုလာတယျဒီနကြေ့ောငျးပိတျရကျဆိုတော့..ရခြေိုးတာနညျးနညျးနောကျကတြယျကဗြာကသီ အိမျခနျးထဲပွေးဝငျလိုကျပွီး..ခြောငျးနကေအြပေါကျမှာနရောယူလိုကျတယျဆရာမကလညျး….ရာဝငျအိုးနားရောကျတယျဆိုရငျပဲ..ထမီကိုတနျးမှာ တငျ..ဆပျပွာခှကျ.အောကျခပြွီး…ရလေေးငါးခှကျခေါငျးပျေါကနဆေကျတိုကျလောငျးခလြိုကျတယျ..လြောကနြတေဲ့ထမီကို ပွနျပွငျဝတျပွီး နောကျထပျ ရလေောငျးလိုကျတယျ.
.ပွီးတော့..မကျြနှာသဈဆေးရညျနဲ့မကျြနှာကိုပှတျပွီးမှသှားပှတျတံပျေါသှားတိုကျဆေးကိုကုနျးပွီးညဈနတောလုပျလိုကျတော့ တငျးပွီးကားထှကျနတေဲ့ တငျပါးကွီးကိုမွငျလိုကျတော့. ကတြော့ငပဲက မရတော့ဖူး..ငေါကျကနဲ့ဆို..ထောငျလာတော့တာပဲ…ဆကျကွညျ့နတေုနျး…ဆရာမက သှားတိုကျနတော မြား..အိုး..ရစေိုထမီကပျနတေဲ့ တငျစိုငျကွီးမြားက..လှုပျရမျးနတောပဲ….မနောသီခငျြးတောငျ သှားသတိရလိုကျသေးတယျ..ဘာတဲ့.”.အိုးလေးလှုပျလိုကျပါ” ဆိုတဲ့အတိုငျး…ရမျးခါနတောပဲ…ကတြော့လကျကလညျးမရတော့ဖူး..လီးကိုပုဆိုးပျေါမှကိုငျပှတျနရေပွီ…သှားတိုကျပွီးတော့..ပလုတျကငျြးလိုကျ..ကုနျး ပွီးထှေးထုတျလိုကျလုပျနတောမြား..ကတြော့စိတျထဲမှာ ဆရာမက..ကုနျးပွီးကတြော့လီးကိုဆောငျ့နတေဲ့ပုံစံမြိုးမွငျရောငျလာတော့ လီး ပိုတောငျလာ တယျ…မရတော့ဘူး..
ပုဆိုကိုဖွညျပွီးရှတေို့းနောကျဆုတျ..လုပျနရေပွီ..ပလုတျကငျြးပွီးသှားတော့..ရထေပျလောငျး..ကတြော့ဘကျကိုမကျြနှာမူလိုကျတယျထမီကိုခွုံတဲ့ပုံစံ နဲ့..ဂြိုငျးတှပှေတျ..နို့တှပှေတျ..ဘယျညာခြိနျးပွီး ထမီကိုကိုငျရငျ..ဝငျးမှတျနတေဲ့.ရငျသားလေးတှကေို မွငျမွငျရတယျ..ကတြော့လကျကလညျးမွနျလာ ပွီ..အဲဒီအခြိနျမှာပဲ..ထမီကိုရငျရှားလုပျပွီး အဖုတျနရောကိုစိတျပွနေပွေ. ပှတျနတောမြား….အိုး.ဆရာမရယျ…ကတြော့စိတျတှမေရတော့ဖူး… ဆရာမ..အဖုတျအရမျးယားလို့. ပှတျနတေဲ့ပုံစံမွငျယောငျလာပွီး…”အိုး..ဆရာမ..ဆရာမ…အိုး..အား.အား..ကတြော့လိုးပေးနျော….ဆရာမ..ဆရာမ…မပူနဲ့ နျော…..လိုးမယျနျော…အိုး..အားး..အရမျးယားနလေား.ဟငျ…လိုးပေးမယျနျော….ထညျ့လိုကျတော့မယျနျော…အိုးဆရာမ…ဆရာမ..ဆရာမ…အ..အ..အ”ဆို ပွီးကတြော့ လီးရညျတှေ..ပနျးထှကျသှားပါတော့တယျ…ကတြျော..ပွီးသှားတော့..တုံးလုံးလှဲလိုကျတယျ..ဆရာမရခြေိုးတာဆကျမခြောငျးဖွဈပေ မယျ့..ခဏအကွာ..ရခြေိုးသံမကွားရတော့..ဆရာမလညျး..ရခြေိုးပွီးသှားတာပဲဖွဈမှာပါ…. “ဒျေါကွညျ..အကူအညီချေါတာ..ဘာလုပျမလို့ ဗြ..အေး.ဟေ့..အဖတေို့အလှူကို မုနျ့ကြှေးပေးမလို့..ဝိုငျးလုပျပေးဖို့ချေါလိုကျတာ..”
”ဪ..ဒါမြား..ရပါတယျဗကြဲ..ဘာလုပျပေးရမလဲပွော”..”အဲဒီမှာ..ဆရာမကို..ကူ လုပျပေးလိုကျ..”ဟုတျကဲ့.ဒျေါကွညျ”..”ဆရာမ ကတြျောဘာလုပျပေးရ မလဲ..”..ဒါလေး မှပေေး..ကမြ ခဏ နားလိုကျဦးမယျ”ဆိုပွီး..မွပွေငျမှာပဲ ဖငျထိုငျခလြိုကျတယျ..ပွီးတော့..အကြီ င်ျလေးကိုဟပွီးယပျခတျနတေယျ….ဆရာမ ကို ခုမှသခြောတှဖေူ့းတာဆိုတော့…သခြောကို အပျေါစီးကနေ ကွညျ့နမေိတယျ..မကျြနှာလေးက ဖွူဖှေးသနျ့စငျပွီး.သှေးကွော စိမျးစိမျးလေး အထငျသား မွငျနရေတယျ…. လညျတိုငျလေးကလညျး..ကြော့ရှငျးနတောပဲ… ကွယျသီးတဈလုံးဟပွီး ယပျခတျနတေဲ့အတှကျ..နို့အုံလေးကလညျး..ဖွူဥနတော ပဲ…ဖွညျးဖွညျးခငျြးမကျြလုံးက အောကျဖကျကို ရောကျသှားတော့..လုံးတဈနတေဲ့ပေါငျသားရယျ..ဖွူဖှေးနတေဲ့ ခွသေလုံးသားတှမွေငျပွီး လူက ငစ မာနျထခငျြလာနပွေီ….အဲလိုကွညျ့နတေုနျးပဲ.ဆရာမက မော့အကွညျ့နဲ့..ကတြျောကွညျ့တာသိသှားပါလရေော…ကတြျောလညျး ရှကျရှကျနဲ့ခေါငျးငုံ့ ဆကျ မှနေလေိုကျတယျ….ခဏနတေော့ ..”ရပွီ..ရပွီ..မငျးမငျးက..အိုးကိုမထား..မမက ယကျခပြေးမယျ..
”အလဲ..ကတြော့နာမညျတောငျ သိလို့ပါလားပေါ့…ကနြေပျသလိုခံစားမိလိုကျတယျ…ကတြျောက အိုးကိုမ…ဆရာမက..ကတြော့မကျြနှာခငျြးဆိုငျကနေ ..ကုနျးပွီးယကျခနြတေော့..ဟနတေဲ့ လညျပငျးက အရမျးကို ဟသှားပွီး…ထမီထပျဆငျ့ထိ..တောကျလြောကျမွငျနရေတယျဗြာ..အဖွူရောငျဘျောလီက..နို့ တှရေုနျးထှကျနသေလို..တငျးနတောပဲမလညျးမ..ကွညျ့လညျးကွညျ့နဲ့..ငပဲကတော့..”ဇ”ပွလာပွီလေ..ဆရာမကလညျး ပွခငျြလို့လားမသိဖူး..ဖွညျးဖွညျး ခငျြးယကျခနြတေယျ…ပွီးသှားတော့ ရှကွေညျ(၃)ဗနျးရတယျ. “”အိုးကို အဲဒီမှာပဲ ခဏခြ…ဗနျးတှေ.အိမျပျေါတငျရအောငျ”ဆိုပွီး..ဗနျး(၁)ဗနျးမပွီး ရှကေ့ ဦးဆောငျထှကျသှားတယျ..ဗနျး(၁)ဗနျးမပွီး..ထပျခကျြမကှာလိုကျတာပေါ့…
အို..ကွညျ့စမျးပါဦးဗြ…တငျတဖကျနဲ့တဖကျက. မကျြစပဈ ချေါသှားသလိုပဲဗြာ..တုနျ.တုနျ..တုတျတတုနျ..တုံတုံ..ခါ..ခါ.ခါ..တုံခါကွီးပေါ့..အိမျပျေါလညျး ရောကျ..ဗွုနျးဆို…ဗနျးကိုကုနျးခလြိုကျတော့..စိတျထဲက.”ဟာ…သှားပွီ..”သူ့ဖငျနဲ့ ငါ့လီးတိုကျပွီ..”တျောသေးတယျ.. ဘာမှမပွောဘူး…”နောကျတဈဗနျး ကြ တျောပဲ..မ..လာခဲ့မယျ””.. ဪ..အေး..အေး” “ဘာလုပျပေးရဦးမလဲ..ဆရာမ” ”ဒီမှာတော့..ပွီးပွီ..ဒျေါကွညျကို..မေးလိုကျဦး”..“”ဒျေါကွညျရေ့..ဒီမှာပွီး ပွီ..ဘာလုပျပေးရဦးမလဲ””’လုပျစရာတော့.မရှိတော့ဘူး….ဪ.ဒါနဲ့..ငါတို့ကတဈပတျလောကျ ကွာမှာဆိုတော့..ဆရာမလိုအပျတာရှိရငျ..လုပျပေးလိုကျပါ ဦး”.”ဟုတျကဲ့..ဒျေါကွညျ..ကတြျောပွနျတော့မယျနျော..””အေး..အေး..ကြေးဇူးပဲ”.. အိမျရောကျတော့…ခုနက ဆရာမ တနျဆာပလာတှေ ပွနျမွငျယောငျ ပွီး.တဈခြီလှုပျရှားသေးတယျ..
“”မငျးမငျးရေ.မငျးမငျး””ဗြ..”ဘာတှလေုပျနတေုနျး”မလုပျပါဖူးဆရာမ..ဘာခိုငျးမလို့လဲပွောလေ..”ခိုငျးစရာမရှိပါဖူး..ပငျြးလို့..အားရငျလာခဲ့ပါ လား..”ဟုတျ..ဆရာမ.လာပွီ”..”ရော့..ကျောဖီသောကျ..”ဟုတျ””မငျးမငျးက..ရညျးစားမရှိဘူးလား..”ဆရာမရယျ..ဘယျသူကကွိုကျမှာလဲ..”ကွိုကျမှာ ပါ..မငျးမငျးကခနျ့ခြောပဲဟာကို”..”ဆရာမကတော့…မွှောကျနပွေီ..ဟိ..ကြှေးစရာ..မရှိဘူးနျော”..”ရပါတယျ..မငျးမငျးရယျ..”ကတြော့သာပွောနေ တာ..ဆရာမရော..မရှိဖူးလား”..ရှိတာပေါ့..စာမေးပှဲပွီးလို့ပွနျရငျ..လကျထပျမှာလေ..”ဪ..ဟုတျလား..”ဆရာမပြျောနတောပေါ့..”..ပြျောတယျ တော့..မဟုတျပါဘူး..သူ့မိဘ..ကိုယျ့မိဘ..သဘောတူတာလေ..ငယျသူငယျခငျြး.သံယောဇဉျတော့ရှိပါတယျ..”ဆရာမတို့တခါမှမတှဖေူ့းလား”..တှဖွေ့ဈပါ တယျ..”တှတေ့ော့..ဆရာမတို့..ဘာလုပျလဲ..ဟငျ”..ဟဲ့..ပွောစရာလား..”ဆရာမကလညျး.ရှကျနသေေးတယျ..သိခငျြလို့ပါ…ပါးလေးတော့..နမျးမှာပေါ့..ပွီး တော့…””ကောငျလေးနျော..ဘာတှလြှေောကျပွောနတောလဲ”..ဆိုပွီး..အရမျးရှကျနတေဲ့ပုံစံနဲ့..မကျြနှာလေးကို..ရဲနတောပဲ..ကတြျောလြောကျမေးနေ တော့..ဆရာမ..ဖိနျးတိနျးရှိနျးတိနျးတှေ..ဖွဈနတေယျ..ဘာစကားမှပွနျမပွောပဲ..လကျနှဈဖကျကို..ပှတျနတေယျ..ပွီးခါမှ..”မငျးမငျး..ခဏနဦေးနျော…
ဆရာမ..ပနျးသီးသှားခှဲလိုကျမယျ..မငျးမငျးစားဖို့”ဆိုပွီး နောကျဖေးဘကျ ထှကျသှားတယျ..တအောကျကွာတော့..”အ”.ဆိုဆရာမအသံထှကျလာတာနဲ့ … နောကျဖေးကို..ကဗြာကယာ.လိုကျသှားလိုကျတော့..ဆရာမလကျမှာ..သှေးတှေ.ထှကျနတေယျ..”ဆရာမ ဘာဖွဈတာလဲ..လကျညိုးမှာလညျး.သှေးတှေ နဲ့..””ပနျးသီးအခှံခှာတာ..ဓားခြျောပွီးရှသှားတာ..”ပွစမျး.ဆိုပွီး..”လကျညိုးလေးကို..ကိုငျလိုကျတာ..ခြောမှတျနတောပဲ..ကတြျောလညျး..မပွောမ ဆို..ဆရာမ..လကျညိုးလေးကို..ယူပွီး..သှေးတိတျအောငျ..ပါးစပျနဲ့ စုပျပေး”..ဆရာမက.ခေါငျးလေးငုံပွီး..အသံတိတျနတေယျ… ဆရာမမကျြနှာလေး ကို..ကွညျ့ပွီး..ကတြော့စိတျတှေ..ယောကျယကျခကျလာတယျ..ငပဲကလညျး..မနတေော့ဘူး…ထိုးထောငျလာပွီ..မထူးတော့ဘူးဆိုပွီး..ဆရာမကို..ရငျခှငျ ထဲဆှဲသှငျးလိုကျတော့..”အို့”ဆိုပွီး.ပါလာတယျ…”ဆရာမရယျ…အရမျးခဈြစရာကောငျးတာပဲ…ကတြျော..ဆရာမကို….ခဈြတယျဗြာ..””မငျးမငျး ရယျ..မ”ကတြျောဆရာမစကားအဆုံးထိမစောငျ့ပဲ..ဆရာမနှုတျခမျးတှကေို..စုပျလိုကျတယျ..ပထမတော့..တှနျးထားသေးတယျ…အခြိနျကွာကွာစုပျလိုကျ တော့..တှနျးအားတော့..လြော့ပွီး..ငွိမျနတေော့တယျ..ဘယျလကျက..တငျသားတှကေိုပှတျညာလကျက..နို့အုံကို..ကလိပေးလိုကျတယျ..ညာလကျက တဖွညျးဖွညျးအောကျလြောဆငျးလာပွီး.ဗိုကျသားလေးကိုပှတျ..ပွီးတော့..ဆရာမစောကျဖုတျနရောကို..ဖမျးဆုပျပွီး..လကျခြောငျးတှနေဲ့အထကျအောကျ ပှတျဆှဲ..နဲ့..ဆရာမခဗြာမှာတော့”ဟငျး!!!အငျးး..အီးအား..ကြှတျ..ကြှတျ”နဲ့..အဖြားတကျနသေလိုပဲ..”မငျးမငျးရယျ..အခနျးထဲသှားရအောငျနျော”တဲ့..အခနျး ထဲရောကျတော့..ကုတငျမှာ.. ခွတှေဲလောငျးထိုငျ..ဘယျလကျက ဆရာမကိုဖတျ.ညာလကျကနို့အုံကိုပှတျ..နှုတျခမျးလေးကိုစုပျ..လြှာလေးနဲ့ ကလိ နဲ့.အလုပျဖွဈနတေယျ..ကွယျသီးတှဖွေုတျတော့..ဝိုငျဖွုတျပေးတယျ.
.နို့တှဘေျောလီပျေါက အုပျကိုငျနတေုနျး.ဆရာမက. ဘျောလီကွယျသီးတှဖွေုတျပတေယျ..အိုးဗြာ..ဝငျးမှတျနတောပဲ..နိုးသီးလေးတှမြေား..မညို ပဲ..ပနျးရောငျသမျးနတေယျ..ဘယျရမလဲ.နိုးသီးလေးကိုကုနျးစုပျပွီး..ညာလကျက..ထမီကိုဖွညျပွီး..နှိုကျတာ.အတှငျးခံမှာ.စိုနပွေီ..အထဲလကျလြို..စောကျ ဖုတျကွီးကို.ကိုငျ..အထကျအောကျပှတျ.””.အိုး..အငျး..ဟီးအီးအငျး..ကြှတျ..ကြှတျ”နဲ့.ဆရာမလညျး.အရမျးဟော့နတေော့တယျ..လူခွငျးခှာပွီး..ဆရာမအ ကြီ င်္..ထမီ..အတှငျးခံတှေ. ခြှတျပေးလိုကျသလို..ကတြျောလညျးအကုနျခြှတျပလိုကျတယျ..ပွီးမှ..ဆရာမကို..ကုတငျမှာလှဲလိုကျပွီး..ခွနှေဈခြောငျးကို ကားထောငျလိုကျတယျ..မို့တကျလာတဲ့..စောကျပတျကိုမွငျတော့..ပါးစပျကအလိုလိုရောကျသှားပွီ..ဘယျပွောကောငျးမလဲ..လှေးတော့တာ ပေါ့..”အိုး..အိုး..ဟငျး..ဟငျးကြှတျ..ကြှတျ..အမလေး..အား..အား!!!!မငျးမငျး… မငျးမငျး..ဟငျးးးဟငျးး..မရတော့ဘူး..အား..အား.ရငျထဲတမြိုးပဲကှယျ…နေ ရတာကွီးကို..အိုး..အိုး..ထှကျပွီး..ထှကျပွီ..အား..အ..အားအ”နဲ့..ဆတျဆတျတုနျခါပွီး ကတြော့မကျြနှာပျေါ..စောကျရညျတှစေငျကုနျတယျ…”မငျးမငျး ရယျ..ကနျတော့..ကနျတော့..”ရပါတယျဆရာမရယျကတြျောဆရာမကို..လိုးတော့မယျနျော””..ပွောစရာလိုသေးလို့လား..မငျးမငျရယျ”မတျတတျကောကျ ရပျပွီး..ဆရာမ..အဖုတျမှာတော့..လီးထိုးထညျ့တော့..”’အ”..ဖွညျးဖွညျးလုပျနျော..မငျးမငျး..ဆရာမ..တခါမှအလိုးခံဖူးတာ..မဟုတျဖူး”..ဟုတျမယျထငျ တယျဗြ…ကတြျောလီးထညျ့တာ..မဝငျပဲ..တဈနတေယျ…
ဒါနဲ့..အားစိုကျပွီးဆောငျ့လိုကျတော့.”ဖောကျ.”အမလေး..သပေါပွီ..အမရေဲ့..”အား.းအား..ဟငျး..ဟငျးနာတယျ..နာတယျ..”ဆိုတော့..သာလေးငွိမျနေ လိုကျတယျ..ခဏကွာဆှဲထုတျတော့..လီးမှာသှေးတှပေနေပွေီ.”.ဪ..ဆရာမကအပြိုစဈသားပဲ”လို့..စိတျထဲပွောမိလိုကျ..ဒီလိုနဲ့..သှငျးလိုကျ.ထုတျ လိုကျ..လုပျလိုကျတော့..”ရပွီး.မငျးမငျး..ဆောငျ့တော့”ပွောတာနဲ့..မငျးမငျးတို့ဆောငျ့ပွီလေ…”ဘှတျ..ဗွဈ..အအီး.ဘှတျ..ဘှတျ..ဘှတျ..ဗွ ဈ..ဒုတျ..အငျ့..အငျ့..အအအ..ကောငျးတယျ..မငျးမငျး”တငျပါးတှေ ကော့ကော့ခံလာတယျ..ကတြျောလညျး..အခကျြ၂၀ လောကျဆောငျ့လိုကျပွီး..ရပျလိုကျ တော့.”.အို..မငျးမငျးရယျ..ဘာလို့ရပျလိုကျတာလဲ”..ဆရာမ..ဖငျကိုကွညျ့ပွီး..လိုးခငျြလို့ပါ..”မငျးမငျးရယျ..ခုတော့..ဒီလိုပဲ.လိုးပါ..နောကျနကြေ့..မငျး မငျး..စိတျတိုငျးကလြိုးနျော””ဟုတျကဲ့..ဆရာမဆိုပွီး..”ဆရာမရယျ..လိုးလို့ကောငျးလိုကျတာ..တအားဆောငျ့မယျနျော…ဆရာမစောကျဖုတျကွီးက..ကြ တော့လီးကို..ညဈထားသလို…အရမျးကိုစီးပိုငျနတော..”အေးပါလိုးပေးပါ..”
..ဗွဈ..ဘှတျ..ဘှတျဗွဈ..ကြှတျ..ဟငျး..ဟငျး..အား..အီး…ဗွဈ..ဗွဈ..အား..အား.လိုးလိုး..နာနာလိုး..အမလေး..ကောငျးတယျ..ဟငျးဟငျး..ကြှတျကြှတျ..အိုး အိုး..မငျးမငျး…မငျးမငျး..မ..ပွီးတော့မယျ..ပွီးတော့မယျ..ဆောငျ့..ဆောငျ..့အား…အာအအ..အငျး..အီး…”ကတြျောလညျး..ပွီးတော့..မယျ….လိုးလိုး ကောငျးလိုကျတာ….အား..အားမ..လရညျတှေ..မစောကျပတျထဲ..ထညျ့လိုကျမယျနျော..ထညျ့ထညျ့..မငျးမငး..အား..အား..အိုး အိုး..ထညျ့….ဘုတျ..ဘုတျ..ဒုတျ…ထညျ့ပွီမ..အားအားအား..”ဆိုပွီး.ကတြျောလညျး..ဆရာမကိုယျပျေါမှောကျ..ကသြှားတော့တယျ..”မငျးမငျး..ထတော့ လေ..မ.လေးနပွေီ.ဟုတျ..မ”…”မမက..အရမျးခဈြစရာကောငျးတာပဲ..တျောပါ..ဟုတျဘဲနဲ့..”တကယျပါမရဲ့..ခုတောငျ.ထပျခဈြခငျြနပွေီ.” “တျောပါ တော့..မငျးမငျးရယျ..မ.စောကျဖုတျက.ကြိနျးနပွေီ..နောကျနတှေ့မှေ..မငျးမငျးသဘောရှိ.”..”တကယျနျော..နေါကျနတှေ့ကေရြငျ..မ..ကိုဖငျပါလိုးမှာ နျော”…”အေးပါ..အေးပါ..ခုပွနျတော့နျော..””ဟုတျ”.ဆိုပွီး..ကတြျောလညျးပွနျလာခဲ့တယျ….အိမျရောကျတော့..အမကေတနျးပွီး..”ဟဲ့..မငျးမငျး..နငျဘယျ တှလြှေောကျသှားနတောလဲ..”ဘယျမှမသှားပါဘူး..အမရော..ခေါငျးရငျး.အိမျမှာပါ..ဆရာမပငျြးတယျဆိုတာနဲ့..စကားထိုငျပွောနကွေတာ”..”မသိပါ ဘူး..နိုငျငံခွား..ထှကျသှားသလားလို့..မကွညျအဖအေလှူ..သှားဝိုငျးလုပျပေးလိုကျဦး..မကောငျးဖူး”..””ဟုတျအမေ..သားနကျဖွနျ..သှားလိုကျမယျ”..
မနကျကတြော့..ဆရာမဆီသှား..နှုတျဆကျအနမျးပေးပွီး..ဧညျ့ခံမနပေဲ ပွနျလာမယျ”ပွောပွီး..ခရီးထှကျခဲ့တယျ… အလှူမှာ ညအိပျ အလုပျတှဝေိုငျးလုပျ နဲ့.အခြိနျတှတေဖွညျးဖွညျးကုနျသှားတယျ..ဒျေါကွညျကိုလညျး..ဧညျ့ခံနမေ့နတေော့ဖူး..ကွိုပွနျနှငျ့မယျပွော…ဒေါကွညျကလညျး..ဆရာမ.အဆငျပွရေဲ့ လား…တို့လညျးဧညျ့ခံညထိအိပျပွီး..နောကျနမှေ့ပွနျလာတော့မယျဆိုတဲ့အကွောငျး..ပွောပွီး..ဧညျ့ခံမနကျပွနျလာခဲ့တယျ..အိမျမှာခဏနားပွီး..ဆရာမ ဆီ..တနျးသှားတော့တာပဲ…”ဆရာမရယျ..လှမျးလိုကျတာ…”..”တူတူပါပဲမငျးမငျးရယျ”တဲ့.အပွနျအလှနျ..အနမျးတှပေေးပွီး.အလှမျးဖွကွေတာပေါ့..“”ည ကရြငျ..လာခဲ့မယျနျော..ဒျေါကွညျ့တို့က.နကျဖွနျ..ပွနျလာမယျတဲ့”..ဆရာမကလညျး..ဒျေါကွညျတို့လာရငျ..ပွနျတော့မှာဆိုတော့..ညကရြငျ..အားလုံး အတိုးခြ …ခဈြကွမယျနျော.”..”အငျးပါ..အရမျးပိုတယျနျော” “မပိုပါဘူး..လိုတောငျလိုသေးတယျ.တာ့တာနျော..မ”ဆိုပွီး..ပွနျလာခဲ့တယျ…….
“”မ..မ..”..”လာလေ..မောငျ..”.“မောငျ့ကိုမြှျောနတော…”မောငျလညျး..အရမျးလာခငျြနတော..အမတေို့အိပျတဲ့အထိ..စောငျ့နရေလို.”..လာပါ..မရယျ..အခနျး ထဲသှားရအောငျ” အခနျးရောကျတယျဆိုရငျပဲ..နို့ကို.အားနဲ့.ညဈလိုကျတာ..”အ”…”မောငျကလညျး..အရမျးပဲ.””ခဈြခငျြနတောကိုဗြ..မ..ဘျောလီမဝတျထား ဖူးလား..အတှငျးခံရော…မဝတျထားဖူးလား…” ”မဝတျထားဖူးလေ..မောငျလာရငျ..ခြှတျမှာပဲဟာကို”..”ပိုခဈြသှာပွီ”..ခု..အကုနျခြှတျလိုကျနျောမ.” အခြိနျဆှဲ မနပေဲ..ပါးလေးကိုနမျး..နားရှကျနမျး..လညျတိုငျနမျး..နှုတျခမျးစုပျပွီး..နို့သီးခေါငျးတှကေို နှဈဖကျစလုံးခပြေေးနတေယျ….မလညျး…”တဟငျးဟငျး..”ဖွဈနေ ပွီ…ကုတငျပျေါအသာလေးလှဲပွီး.နို့တဖကျကိုစုပျ..တဖကျကိုခြေ..ပွီး..လကျတဖကျက..ဝမျးဗိုကျသားလေးတှကေို..ပှတျပေးနတေယျ..နို့စို့ရာက နေ..ဝမျးဗိုကျကို..လြှာနဲ့ယကျ..ခကျြတိုငျလေးကို..လြှာနဲ့ထိုးမှေ..လုပျတော့..ဆရာမတှနျ့လိမျနပွေီလေ..အောကျကို..ထပျဆငျးသှားပွီး..ဆီးခုံလေးကိုနမျး… အဖုတျပတျလညျနမျး..ပေါငျနဲ့အဖုတျကွားနမျးနဲ့..ဆရာမက ကတြော့ခေါငျးကိုငျပွီး..သူအဖုတျဆီ..ပို့နတေယျ..ဆရာမ..အနမျးခံခငျြနပွေီဆို..ပျေါလှငျနပွေီ လေ..ကတြျောလညျး..သူတညျ့ပေးသညျ့အတိုငျး..စနမျးပါတော့တယျ…စောကျပတျနှုတျခမျးသားလေးကို..လြှာနဲ့ကလျောထိုးလိုကျ..စုပျလိုကျနဲ့လုပျနေ တာ..”’အိုး..အိုး..အငျးအငျး..ဟဟ..ကြှတျ.ကြှတျ..မောငျရယျ..ဟငျးဟငျး…”ညီးသံတှထှေကျနတေုနျး..လြှာကို အပွားလိုကျ..ဆရာမစောကျပတျ ကို..အထကျအောကျ..ယကျပေးလိုကျ..စောကျစိကို..လြှာနဲ့ကလျောထိုးလိုကျ..တခါတခါ..စောကျစိကို စုပျလိုကျနဲ့..ဆရာမခဗြာ..”’တအငျးအငျး…တအား အား”နဲ့.လိမျကောကျနတောပဲ..ကတြျောလညျး..ဆရာမစောကျပတျကို..နမျးတာ..မရပျသေးပဲ..တငျပါးကိုမလိုကျပွီး..စအိုကနေ..စောကျပတျကွာလေး ကို..လြှာနဲ့ယကျပေးလိုကျတယျ.. “”ဟငျး.ဟငျး..အားအား..အိုးအိုး..ကြှတျကြှတျ..မောငျရယျ..မနတေကျတော့ဘူး….မောငျဘယျလိုတှလေုပျနတောလဲ ကှာ…အား..အ.ား. မ..ကိုလုပျပေးတော့..မ..အရမျးအလိုးခံခငျြနပွေီ..လိုးပေးပါတော့…
အီး..အီး..အား.အား..ကောငျလိုကျတာ..မောငျရယျ…တျောပါတော့..အဟငျ့..ဟငျ့..ဟငျ့..အ..အ…ယားတယျ…ယားတယျ..အဟငျ့. ဒုက်ခပါပဲ….အဟငျ့… ထှကျကုနျပွီ..ဟငျ့..အဟငျ့.” ဆရာမက..ကတြော့မကျြနှာမှာစောကျရညျတှေ.ပမှောစိုး၍ဆှဲဖယျပမေယျ့..အပွဈလိုကျ..အခဲလိုကျ..စောကျရညျတှကေို..လြှာ နဲ့သိမျး..မွိုခပြွလိုကျပါတယျ…”ကှယျ..ဒီလောကျမလုပျပါနဲ့..မောငျရယျ…မ.ကို.လိုးပေးပါတော့နျော..” ”မောငျးလိုးတော့မယျနျော..မ”..”အငျး”မတျတကျ ရပျလိုကျပွီ…စောကျစိထိပျကို..လီးထိပျနဲ့သုံးခါလောကျကလျောထိုးပွီး..စောကျပတျဝမှာ.တကေ့ာ..ထိုးထညျ့လိုကျတာ..”ဗွဈ..ဗွဈ..အား..အီး..အဟငျ့ ဟငျ့..အီး.ပွှတျ..ဘှတျ..”အသံတှအေရမျးမညျတာပဲမောငျရယျ.”..”ဒီလောကျတော့မညျတာပေါ့..မရဲ့..သဘာဝပဲဟာ..”အခကျြနှဈဆယျကြျောလောကျဆော ငျ့လိုးပွီးတော့..လီးထုတျလိုကျပွီး””မ..ဖငျကုနျးပေး..””အငျး”..မဖငျကုနျးတာနဲ့..ခါးကိုကိုငျ..အားနဲ့ဆောငျ့လိုး..ထညျ့လိုကျတယျ..”အား..ဗွဈ ပွှတျ..ဘှတျ..ပွှတျ..ပဈ..ဒုတျ..အားအား.”ကတြျောဆောငျ့လိုးနတေုနျး..စအိုလေးကိုလညျး..ကလိပေးနတေယျခဏကွာတော့..မစောကျရညျပနေတေဲ့..လီး နဲ့..စအိုကို.တညျ့ပွီးထိုးလိုကျတာ..”အား..နာတယျ..နာတယျ..အ..”ပွီးရငျမနာတော့ပါဘူး..မရယျ”ဆိုပွီး..ဆကျဆောငျ့နလေိုကျ တယျ…”.အား..အီး..အူး..အမလေး..အားအား…ဆောငျ့…ဆောငျ့..ကောငျးလာပွီ…အိုး..အိုး..မောငျရယျ..ဖငျထဲတော့..မပွီးနဲ့နျော…မ.လေ..မောငျရငျသှေး လိုခငျြလို့ပါနျော…
အား..အငျး..ကြှတျ..အား..အမလေးးး”မ.အသံတှကေို.ကတြော့ကို..အမွနျပွီးအောငျလှုပျဆျောနသေလိုပဲကတြျောလညျး..အရမျးကောငျးနပွေီ….လီး ကို..ဖငျထဲကခြှတျပွီး..စောကျပတျကို..ပွောငျးလိုးလိုကျတယျကတြျောလညျးပွီးခငျြနပွေီလေ..”ဗွဈ..စိ..အား..ဟား..ဟငျး..ဟ ငျးး..ဖောကျ….ဖောကျ..အား..ကြှတျ..ကြှတျ..မောငျရယျ..ကောငျး..ကောငျးလိုကျတာ..အသညျးကိုခိုကျနတောပဲ…”ကတြော့လီးကသနျမာသညျ ထကျ..သနျမာလာသညျ..မ.ရဲ့စောကျခေါငျးအတှငျးသားမြားကလညျး..ဖိသိပျကွပျသိပျစှာဆှဲထားသလိုဖွဈနတေော့..မအောငျ့နိုငျတော့ပဲ..သုတျရညျမြား ကို..မ..စောကျခေါငျးထဲ..ပနျးထညျ့လိုကျပါတော့တယျ..ကတြျောလညျး…ခဏနားပွီး..ပွနျလာခဲ့ပါတော့တယျ..နောကျ၂ရကျလောကျကွာတော့..ဆရာမ လညျး..ပွနျသှားတယျ။အဆကျအသှယျလညျး..မရတော့ဘူး။.ကွာတာကတော့…ဆရာမကွညျ့ပွာ..သူ့မိဘသဘောတူတဲ့သူနဲ့..လကျထပျပွီး.ကိုယျဝနျရှိနေ ပွီလို့ကွားပါတယျ…ဆရာမ.အလုပျကလညျးထှကျလိုကျပွီးတဲ့။ဗိုကျထဲက..ရငျသှေးလေးကတော့… #crd ပွီးပါပွီ
ဆရာမ နာမည်က ကြည်ပြာ..ကျတော့တို့ရွာကို လာပြီး မူလတန်းကိုလာရောက်စာသင်ပေးသော..ရပ်ရွာခန့်..ဆရာမ.တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ကျတော့ အိမ်ခေါင်းရင်းအိမ်မှာ နေထိုင်ရန် ရပ်ရွာက သတ်မှတ်ထားပါသည်။ဆရာမကြည်ပြာက. အသားကဖြူဖြူ…အရပ်ကနဲနဲပုတယ်…ရယ်လိုက်ရင် ပါးချိုင့် လေးခွက်ပြီး ..သွားလေးတွေက ဖြူဖွေးနေတာပဲ…ဆရာမဝတ်စုံလေးဝတ်လိုက်ရင်..အရမ်းကို ကျက်သရေရှိ လှပတဲ့သူပါ…လှမ်းလျှောက်ရင်လည်း..ညင် ညင်သာသာလေး လှမ်းလျှောက်တက်ပြီး…ဘေးတိုက်တုန်ခါတဲ့..တင်သားများမဟုတ်ဘဲ…အပေါ်အောက်..လှုပ်ခါနေတဲ့ တင်သားများကို ပိုင်ဆိုင်သူလည်း ဖြစ်ပါသည်။
သူနဲ့အရမ်းမရင်းနှီးပေမယ့်လည်း…ကျတော့အတွက်မှန်းထုစရာ..စိတ်ကူးရင် မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပါသည်။.မှန်းထုစရာ အကြောင်းအရာတွေကလည်း ရှိတယ်လေ…မိုးလင်းလို့ သေးပေါက်ရင် အိမ်သာပေါ်မတက်ပဲ…အိမ်သာရှေ့မှာ..ထမိန်လှန်သေးပေါက်ခြင်း၊ရေချိုးရင် သူနေတဲ့အိမ်ခြေရင်းမှာ ချိုးတက် ခြင်း၊ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီးပြန်လာရင် ရေချိုးတဲ့နေရာလေးမှာပဲ…ထမီလှန် ဓာတ်မီးထိုးသေးပေါက်ခြင်းတို့ဟာ..ကျတော့အတွက် ဆရာမကိုမှန်း…. ဂွင်းထုခြင်း ကိုဖြစ်စေခဲ့တာပေါ့…..အဲဒီအထဲကမှ..ကျတော်…ဂွင်းထုအရသာအရှိဆုံးက..မနက်ရေချိုးချိန်နှင့်ညနေရေချိုးချိန်ပဲ…ဆရာမကြည်ပြာ ရေတခါချိုးလျှင် အချိန်တော်တော်ကြာတယ်..နှံစပ်အောင်လည်းတစ်ကိုယ်လုံးပွတ် ချေးတွန်းတယ်….ဆရာမကြည်ပြာရေချိုးတဲ့နေရာက ကျတော့အခန်းရဲ့ခေါင်းရင်း ဘက်…သူနေတဲ့အိမ်ရဲ့ခြေရင်းဘက်ကျတာပေါ့….တောရွာတွေဆိုတော့..ရေချိုးခန်းအကာတွေ..ဘာတွေ..မရှိဘူး..ရာဝင်အိုးနှင့်အဝတ်လျှော်စရာသစ်သား တစ်တုံးပဲရှိတယ်..ကျတော်ကဆင်းရဲတော့ ..ဝါးထရံကာအိမ်လေးနဲ့ပဲနေနိုင်ပါတယ်…ချောင်းကြည့်ဖို့အတွက် အဆင်တော့ပြေတယ်…
ဆရာမကြည်ပြာရေချိုးမယ်..မြင်လိုက်တာနဲ့..ကျတော်အခန်းထဲပြေးဝင်တော့တာပဲ… ဆရာမရေချိုးရင်ထမီအပိုတထည်ကိုဘယ်ဘက်လက်ဖျံပေါ် တင်..ညာလက်ကဆပ်ပြာခြင်းကိုကိုင်ပြီး..ရေချိုးတဲ့နေရာကိုလာတယ်ဒီနေ့ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုတော့..ရေချိုးတာနည်းနည်းနောက်ကျတယ်ကဗျာကသီ အိမ်ခန်းထဲပြေးဝင်လိုက်ပြီး..ချောင်းနေကျအပေါက်မှာနေရာယူလိုက်တယ်ဆရာမကလည်း….ရာဝင်အိုးနားရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ..ထမီကိုတန်းမှာ တင်..ဆပ်ပြာခွက်.အောက်ချပြီး…ရေလေးငါးခွက်ခေါင်းပေါ်ကနေဆက်တိုက်လောင်းချလိုက်တယ်..လျောကျနေတဲ့ထမီကို ပြန်ပြင်ဝတ်ပြီး နောက်ထပ် ရေလောင်းလိုက်တယ်.
.ပြီးတော့..မျက်နှာသစ်ဆေးရည်နဲ့မျက်နှာကိုပွတ်ပြီးမှသွားပွတ်တံပေါ်သွားတိုက်ဆေးကိုကုန်းပြီးညစ်နေတာလုပ်လိုက်တော့ တင်းပြီးကားထွက်နေတဲ့ တင်ပါးကြီးကိုမြင်လိုက်တော့. ကျတော့ငပဲက မရတော့ဖူး..ငေါက်ကနဲ့ဆို..ထောင်လာတော့တာပဲ…ဆက်ကြည့်နေတုန်း…ဆရာမက သွားတိုက်နေတာ များ..အိုး..ရေစိုထမီကပ်နေတဲ့ တင်စိုင်ကြီးများက..လှုပ်ရမ်းနေတာပဲ….မနောသီချင်းတောင် သွားသတိရလိုက်သေးတယ်..ဘာတဲ့.”.အိုးလေးလှုပ်လိုက်ပါ” ဆိုတဲ့အတိုင်း…ရမ်းခါနေတာပဲ…ကျတော့လက်ကလည်းမရတော့ဖူး..လီးကိုပုဆိုးပေါ်မှကိုင်ပွတ်နေရပြီ…သွားတိုက်ပြီးတော့..ပလုတ်ကျင်းလိုက်..ကုန်း ပြီးထွေးထုတ်လိုက်လုပ်နေတာများ..ကျတော့စိတ်ထဲမှာ ဆရာမက..ကုန်းပြီးကျတော့လီးကိုဆောင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရောင်လာတော့ လီး ပိုတောင်လာ တယ်…မရတော့ဘူး..
ပုဆိုကိုဖြည်ပြီးရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်..လုပ်နေရပြီ..ပလုတ်ကျင်းပြီးသွားတော့..ရေထပ်လောင်း..ကျတော့ဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်တယ်ထမီကိုခြုံတဲ့ပုံစံ နဲ့..ဂျိုင်းတွေပွတ်..နို့တွေပွတ်..ဘယ်ညာချိန်းပြီး ထမီကိုကိုင်ရင်..ဝင်းမွတ်နေတဲ့.ရင်သားလေးတွေကို မြင်မြင်ရတယ်..ကျတော့လက်ကလည်းမြန်လာ ပြီ..အဲဒီအချိန်မှာပဲ..ထမီကိုရင်ရှားလုပ်ပြီး အဖုတ်နေရာကိုစိတ်ပြေနပြေ. ပွတ်နေတာများ….အိုး.ဆရာမရယ်…ကျတော့စိတ်တွေမရတော့ဖူး… ဆရာမ..အဖုတ်အရမ်းယားလို့. ပွတ်နေတဲ့ပုံစံမြင်ယောင်လာပြီး…”အိုး..ဆရာမ..ဆရာမ…အိုး..အား.အား..ကျတော့လိုးပေးနော်….ဆရာမ..ဆရာမ…မပူနဲ့ နော်…..လိုးမယ်နော်…အိုး..အားး..အရမ်းယားနေလား.ဟင်…လိုးပေးမယ်နော်….ထည့်လိုက်တော့မယ်နော်…အိုးဆရာမ…ဆရာမ..ဆရာမ…အ..အ..အ”ဆို ပြီးကျတော့ လီးရည်တွေ..ပန်းထွက်သွားပါတော့တယ်…ကျတော်..ပြီးသွားတော့..တုံးလုံးလှဲလိုက်တယ်..ဆရာမရေချိုးတာဆက်မချောင်းဖြစ်ပေ မယ့်..ခဏအကြာ..ရေချိုးသံမကြားရတော့..ဆရာမလည်း..ရေချိုးပြီးသွားတာပဲဖြစ်မှာပါ…. “ဒေါ်ကြည်..အကူအညီခေါ်တာ..ဘာလုပ်မလို့ ဗျ..အေး.ဟေ့..အဖေတို့အလှူကို မုန့်ကျွေးပေးမလို့..ဝိုင်းလုပ်ပေးဖို့ခေါ်လိုက်တာ..”
”ဪ..ဒါများ..ရပါတယ်ဗျကဲ..ဘာလုပ်ပေးရမလဲပြော”..”အဲဒီမှာ..ဆရာမကို..ကူ လုပ်ပေးလိုက်..”ဟုတ်ကဲ့.ဒေါ်ကြည်”..”ဆရာမ ကျတော်ဘာလုပ်ပေးရ မလဲ..”..ဒါလေး မွှေပေး..ကျမ ခဏ နားလိုက်ဦးမယ်”ဆိုပြီး..မြေပြင်မှာပဲ ဖင်ထိုင်ချလိုက်တယ်..ပြီးတော့..အကျီ င်္လေးကိုဟပြီးယပ်ခတ်နေတယ်….ဆရာမ ကို ခုမှသေချာတွေ့ဖူးတာဆိုတော့…သေချာကို အပေါ်စီးကနေ ကြည့်နေမိတယ်..မျက်နှာလေးက ဖြူဖွေးသန့်စင်ပြီး.သွေးကြော စိမ်းစိမ်းလေး အထင်သား မြင်နေရတယ်…. လည်တိုင်လေးကလည်း..ကျော့ရှင်းနေတာပဲ… ကြယ်သီးတစ်လုံးဟပြီး ယပ်ခတ်နေတဲ့အတွက်..နို့အုံလေးကလည်း..ဖြူဥနေတာ ပဲ…ဖြည်းဖြည်းချင်းမျက်လုံးက အောက်ဖက်ကို ရောက်သွားတော့..လုံးတစ်နေတဲ့ပေါင်သားရယ်..ဖြူဖွေးနေတဲ့ ခြေသလုံးသားတွေမြင်ပြီး လူက ငစ မာန်ထချင်လာနေပြီ….အဲလိုကြည့်နေတုန်းပဲ.ဆရာမက မော့အကြည့်နဲ့..ကျတော်ကြည့်တာသိသွားပါလေရော…ကျတော်လည်း ရှက်ရှက်နဲ့ခေါင်းငုံ့ ဆက် မွှေနေလိုက်တယ်….ခဏနေတော့ ..”ရပြီ..ရပြီ..မင်းမင်းက..အိုးကိုမထား..မမက ယက်ချပေးမယ်..
”အလဲ..ကျတော့နာမည်တောင် သိလို့ပါလားပေါ့…ကျေနပ်သလိုခံစားမိလိုက်တယ်…ကျတော်က အိုးကိုမ…ဆရာမက..ကျတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေ ..ကုန်းပြီးယက်ချနေတော့..ဟနေတဲ့ လည်ပင်းက အရမ်းကို ဟသွားပြီး…ထမီထပ်ဆင့်ထိ..တောက်လျောက်မြင်နေရတယ်ဗျာ..အဖြူရောင်ဘော်လီက..နို့ တွေရုန်းထွက်နေသလို..တင်းနေတာပဲမလည်းမ..ကြည့်လည်းကြည့်နဲ့..ငပဲကတော့..”ဇ”ပြလာပြီလေ..ဆရာမကလည်း ပြချင်လို့လားမသိဖူး..ဖြည်းဖြည်း ချင်းယက်ချနေတယ်…ပြီးသွားတော့ ရွှေကြည်(၃)ဗန်းရတယ်. “”အိုးကို အဲဒီမှာပဲ ခဏချ…ဗန်းတွေ.အိမ်ပေါ်တင်ရအောင်”ဆိုပြီး..ဗန်း(၁)ဗန်းမပြီး ရှေ့က ဦးဆောင်ထွက်သွားတယ်..ဗန်း(၁)ဗန်းမပြီး..ထပ်ချက်မကွာလိုက်တာပေါ့…
အို..ကြည့်စမ်းပါဦးဗျ…တင်တဖက်နဲ့တဖက်က. မျက်စပစ် ခေါ်သွားသလိုပဲဗျာ..တုန်.တုန်..တုတ်တတုန်..တုံတုံ..ခါ..ခါ.ခါ..တုံခါကြီးပေါ့..အိမ်ပေါ်လည်း ရောက်..ဗြုန်းဆို…ဗန်းကိုကုန်းချလိုက်တော့..စိတ်ထဲက.”ဟာ…သွားပြီ..”သူ့ဖင်နဲ့ ငါ့လီးတိုက်ပြီ..”တော်သေးတယ်.. ဘာမှမပြောဘူး…”နောက်တစ်ဗန်း ကျ တော်ပဲ..မ..လာခဲ့မယ်””.. ဪ..အေး..အေး” “ဘာလုပ်ပေးရဦးမလဲ..ဆရာမ” ”ဒီမှာတော့..ပြီးပြီ..ဒေါ်ကြည်ကို..မေးလိုက်ဦး”..“”ဒေါ်ကြည်ရေ့..ဒီမှာပြီး ပြီ..ဘာလုပ်ပေးရဦးမလဲ””’လုပ်စရာတော့.မရှိတော့ဘူး….ဪ.ဒါနဲ့..ငါတို့ကတစ်ပတ်လောက် ကြာမှာဆိုတော့..ဆရာမလိုအပ်တာရှိရင်..လုပ်ပေးလိုက်ပါ ဦး”.”ဟုတ်ကဲ့..ဒေါ်ကြည်..ကျတော်ပြန်တော့မယ်နော်..””အေး..အေး..ကျေးဇူးပဲ”.. အိမ်ရောက်တော့…ခုနက ဆရာမ တန်ဆာပလာတွေ ပြန်မြင်ယောင် ပြီး.တစ်ချီလှုပ်ရှားသေးတယ်..
“”မင်းမင်းရေ.မင်းမင်း””ဗျ..”ဘာတွေလုပ်နေတုန်း”မလုပ်ပါဖူးဆရာမ..ဘာခိုင်းမလို့လဲပြောလေ..”ခိုင်းစရာမရှိပါဖူး..ပျင်းလို့..အားရင်လာခဲ့ပါ လား..”ဟုတ်..ဆရာမ.လာပြီ”..”ရော့..ကော်ဖီသောက်..”ဟုတ်””မင်းမင်းက..ရည်းစားမရှိဘူးလား..”ဆရာမရယ်..ဘယ်သူကကြိုက်မှာလဲ..”ကြိုက်မှာ ပါ..မင်းမင်းကခန့်ချောပဲဟာကို”..”ဆရာမကတော့…မြှောက်နေပြီ..ဟိ..ကျွေးစရာ..မရှိဘူးနော်”..”ရပါတယ်..မင်းမင်းရယ်..”ကျတော့သာပြောနေ တာ..ဆရာမရော..မရှိဖူးလား”..ရှိတာပေါ့..စာမေးပွဲပြီးလို့ပြန်ရင်..လက်ထပ်မှာလေ..”ဪ..ဟုတ်လား..”ဆရာမပျော်နေတာပေါ့..”..ပျော်တယ် တော့..မဟုတ်ပါဘူး..သူ့မိဘ..ကိုယ့်မိဘ..သဘောတူတာလေ..ငယ်သူငယ်ချင်း.သံယောဇဉ်တော့ရှိပါတယ်..”ဆရာမတို့တခါမှမတွေ့ဖူးလား”..တွေ့ဖြစ်ပါ တယ်..”တွေ့တော့..ဆရာမတို့..ဘာလုပ်လဲ..ဟင်”..ဟဲ့..ပြောစရာလား..”ဆရာမကလည်း.ရှက်နေသေးတယ်..သိချင်လို့ပါ…ပါးလေးတော့..နမ်းမှာပေါ့..ပြီး တော့…””ကောင်လေးနော်..ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲ”..ဆိုပြီး..အရမ်းရှက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့..မျက်နှာလေးကို..ရဲနေတာပဲ..ကျတော်လျောက်မေးနေ တော့..ဆရာမ..ဖိန်းတိန်းရှိန်းတိန်းတွေ..ဖြစ်နေတယ်..ဘာစကားမှပြန်မပြောပဲ..လက်နှစ်ဖက်ကို..ပွတ်နေတယ်..ပြီးခါမှ..”မင်းမင်း..ခဏနေဦးနော်…
ဆရာမ..ပန်းသီးသွားခွဲလိုက်မယ်..မင်းမင်းစားဖို့”ဆိုပြီး နောက်ဖေးဘက် ထွက်သွားတယ်..တအောက်ကြာတော့..”အ”.ဆိုဆရာမအသံထွက်လာတာနဲ့ … နောက်ဖေးကို..ကဗျာကယာ.လိုက်သွားလိုက်တော့..ဆရာမလက်မှာ..သွေးတွေ.ထွက်နေတယ်..”ဆရာမ ဘာဖြစ်တာလဲ..လက်ညိုးမှာလည်း.သွေးတွေ နဲ့..””ပန်းသီးအခွံခွာတာ..ဓားချော်ပြီးရှသွားတာ..”ပြစမ်း.ဆိုပြီး..”လက်ညိုးလေးကို..ကိုင်လိုက်တာ..ချောမွတ်နေတာပဲ..ကျတော်လည်း..မပြောမ ဆို..ဆရာမ..လက်ညိုးလေးကို..ယူပြီး..သွေးတိတ်အောင်..ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ပေး”..ဆရာမက.ခေါင်းလေးငုံပြီး..အသံတိတ်နေတယ်… ဆရာမမျက်နှာလေး ကို..ကြည့်ပြီး..ကျတော့စိတ်တွေ..ယောက်ယက်ခက်လာတယ်..ငပဲကလည်း..မနေတော့ဘူး…ထိုးထောင်လာပြီ..မထူးတော့ဘူးဆိုပြီး..ဆရာမကို..ရင်ခွင် ထဲဆွဲသွင်းလိုက်တော့..”အို့”ဆိုပြီး.ပါလာတယ်…”ဆရာမရယ်…အရမ်းချစ်စရာကောင်းတာပဲ…ကျတော်..ဆရာမကို….ချစ်တယ်ဗျာ..””မင်းမင်း ရယ်..မ”ကျတော်ဆရာမစကားအဆုံးထိမစောင့်ပဲ..ဆရာမနှုတ်ခမ်းတွေကို..စုပ်လိုက်တယ်..ပထမတော့..တွန်းထားသေးတယ်…အချိန်ကြာကြာစုပ်လိုက် တော့..တွန်းအားတော့..လျော့ပြီး..ငြိမ်နေတော့တယ်..ဘယ်လက်က..တင်သားတွေကိုပွတ်ညာလက်က..နို့အုံကို..ကလိပေးလိုက်တယ်..ညာလက်က တဖြည်းဖြည်းအောက်လျောဆင်းလာပြီး.ဗိုက်သားလေးကိုပွတ်..ပြီးတော့..ဆရာမစောက်ဖုတ်နေရာကို..ဖမ်းဆုပ်ပြီး..လက်ချောင်းတွေနဲ့အထက်အောက် ပွတ်ဆွဲ..နဲ့..ဆရာမခဗျာမှာတော့”ဟင်း!!!အင်းး..အီးအား..ကျွတ်..ကျွတ်”နဲ့..အဖျားတက်နေသလိုပဲ..”မင်းမင်းရယ်..အခန်းထဲသွားရအောင်နော်”တဲ့..အခန်း ထဲရောက်တော့..ကုတင်မှာ.. ခြေတွဲလောင်းထိုင်..ဘယ်လက်က ဆရာမကိုဖတ်.ညာလက်ကနို့အုံကိုပွတ်..နှုတ်ခမ်းလေးကိုစုပ်..လျှာလေးနဲ့ ကလိ နဲ့.အလုပ်ဖြစ်နေတယ်..ကြယ်သီးတွေဖြုတ်တော့..ဝိုင်ဖြုတ်ပေးတယ်.
.နို့တွေဘော်လီပေါ်က အုပ်ကိုင်နေတုန်း.ဆရာမက. ဘော်လီကြယ်သီးတွေဖြုတ်ပေတယ်..အိုးဗျာ..ဝင်းမွတ်နေတာပဲ..နိုးသီးလေးတွေများ..မညို ပဲ..ပန်းရောင်သမ်းနေတယ်..ဘယ်ရမလဲ.နိုးသီးလေးကိုကုန်းစုပ်ပြီး..ညာလက်က..ထမီကိုဖြည်ပြီး..နှိုက်တာ.အတွင်းခံမှာ.စိုနေပြီ..အထဲလက်လျို..စောက် ဖုတ်ကြီးကို.ကိုင်..အထက်အောက်ပွတ်.””.အိုး..အင်း..ဟီးအီးအင်း..ကျွတ်..ကျွတ်”နဲ့.ဆရာမလည်း.အရမ်းဟော့နေတော့တယ်..လူခြင်းခွာပြီး..ဆရာမအ ကျီ င်္..ထမီ..အတွင်းခံတွေ. ချွတ်ပေးလိုက်သလို..ကျတော်လည်းအကုန်ချွတ်ပလိုက်တယ်..ပြီးမှ..ဆရာမကို..ကုတင်မှာလှဲလိုက်ပြီး..ခြေနှစ်ချောင်းကို ကားထောင်လိုက်တယ်..မို့တက်လာတဲ့..စောက်ပတ်ကိုမြင်တော့..ပါးစပ်ကအလိုလိုရောက်သွားပြီ..ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ..လွေးတော့တာ ပေါ့..”အိုး..အိုး..ဟင်း..ဟင်းကျွတ်..ကျွတ်..အမလေး..အား..အား!!!!မင်းမင်း… မင်းမင်း..ဟင်းးးဟင်းး..မရတော့ဘူး..အား..အား.ရင်ထဲတမျိုးပဲကွယ်…နေ ရတာကြီးကို..အိုး..အိုး..ထွက်ပြီး..ထွက်ပြီ..အား..အ..အားအ”နဲ့..ဆတ်ဆတ်တုန်ခါပြီး ကျတော့မျက်နှာပေါ်..စောက်ရည်တွေစင်ကုန်တယ်…”မင်းမင်း ရယ်..ကန်တော့..ကန်တော့..”ရပါတယ်ဆရာမရယ်ကျတော်ဆရာမကို..လိုးတော့မယ်နော်””..ပြောစရာလိုသေးလို့လား..မင်းမင်ရယ်”မတ်တတ်ကောက် ရပ်ပြီး..ဆရာမ..အဖုတ်မှာတော့..လီးထိုးထည့်တော့..”’အ”..ဖြည်းဖြည်းလုပ်နော်..မင်းမင်း..ဆရာမ..တခါမှအလိုးခံဖူးတာ..မဟုတ်ဖူး”..ဟုတ်မယ်ထင် တယ်ဗျ…ကျတော်လီးထည့်တာ..မဝင်ပဲ..တစ်နေတယ်…
ဒါနဲ့..အားစိုက်ပြီးဆောင့်လိုက်တော့.”ဖောက်.”အမလေး..သေပါပြီ..အမေရဲ့..”အား.းအား..ဟင်း..ဟင်းနာတယ်..နာတယ်..”ဆိုတော့..သာလေးငြိမ်နေ လိုက်တယ်..ခဏကြာဆွဲထုတ်တော့..လီးမှာသွေးတွေပေနေပြီ.”.ဪ..ဆရာမကအပျိုစစ်သားပဲ”လို့..စိတ်ထဲပြောမိလိုက်..ဒီလိုနဲ့..သွင်းလိုက်.ထုတ် လိုက်..လုပ်လိုက်တော့..”ရပြီး.မင်းမင်း..ဆောင့်တော့”ပြောတာနဲ့..မင်းမင်းတို့ဆောင့်ပြီလေ…”ဘွတ်..ဗြစ်..အအီး.ဘွတ်..ဘွတ်..ဘွတ်..ဗြ စ်..ဒုတ်..အင့်..အင့်..အအအ..ကောင်းတယ်..မင်းမင်း”တင်ပါးတွေ ကော့ကော့ခံလာတယ်..ကျတော်လည်း..အချက်၂၀ လောက်ဆောင့်လိုက်ပြီး..ရပ်လိုက် တော့.”.အို..မင်းမင်းရယ်..ဘာလို့ရပ်လိုက်တာလဲ”..ဆရာမ..ဖင်ကိုကြည့်ပြီး..လိုးချင်လို့ပါ..”မင်းမင်းရယ်..ခုတော့..ဒီလိုပဲ.လိုးပါ..နောက်နေ့ကျ..မင်း မင်း..စိတ်တိုင်းကျလိုးနော်””ဟုတ်ကဲ့..ဆရာမဆိုပြီး..”ဆရာမရယ်..လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာ..တအားဆောင့်မယ်နော်…ဆရာမစောက်ဖုတ်ကြီးက..ကျ တော့လီးကို..ညစ်ထားသလို…အရမ်းကိုစီးပိုင်နေတာ..”အေးပါလိုးပေးပါ..”
..ဗြစ်..ဘွတ်..ဘွတ်ဗြစ်..ကျွတ်..ဟင်း..ဟင်း..အား..အီး…ဗြစ်..ဗြစ်..အား..အား.လိုးလိုး..နာနာလိုး..အမလေး..ကောင်းတယ်..ဟင်းဟင်း..ကျွတ်ကျွတ်..အိုး အိုး..မင်းမင်း…မင်းမင်း..မ..ပြီးတော့မယ်..ပြီးတော့မယ်..ဆောင့်..ဆောင်..့အား…အာအအ..အင်း..အီး…”ကျတော်လည်း..ပြီးတော့..မယ်….လိုးလိုး ကောင်းလိုက်တာ….အား..အားမ..လရည်တွေ..မစောက်ပတ်ထဲ..ထည့်လိုက်မယ်နော်..ထည့်ထည့်..မင်းမငး..အား..အား..အိုး အိုး..ထည့်….ဘုတ်..ဘုတ်..ဒုတ်…ထည့်ပြီမ..အားအားအား..”ဆိုပြီး.ကျတော်လည်း..ဆရာမကိုယ်ပေါ်မှောက်..ကျသွားတော့တယ်..”မင်းမင်း..ထတော့ လေ..မ.လေးနေပြီ.ဟုတ်..မ”…”မမက..အရမ်းချစ်စရာကောင်းတာပဲ..တော်ပါ..ဟုတ်ဘဲနဲ့..”တကယ်ပါမရဲ့..ခုတောင်.ထပ်ချစ်ချင်နေပြီ.” “တော်ပါ တော့..မင်းမင်းရယ်..မ.စောက်ဖုတ်က.ကျိန်းနေပြီ..နောက်နေ့တွေမှ..မင်းမင်းသဘောရှိ.”..”တကယ်နော်..နေါက်နေ့တွေကျရင်..မ..ကိုဖင်ပါလိုးမှာ နော်”…”အေးပါ..အေးပါ..ခုပြန်တော့နော်..””ဟုတ်”.ဆိုပြီး..ကျတော်လည်းပြန်လာခဲ့တယ်….အိမ်ရောက်တော့..အမေကတန်းပြီး..”ဟဲ့..မင်းမင်း..နင်ဘယ် တွေလျှောက်သွားနေတာလဲ..”ဘယ်မှမသွားပါဘူး..အမေရာ..ခေါင်းရင်း.အိမ်မှာပါ..ဆရာမပျင်းတယ်ဆိုတာနဲ့..စကားထိုင်ပြောနေကြတာ”..”မသိပါ ဘူး..နိုင်ငံခြား..ထွက်သွားသလားလို့..မကြည်အဖေအလှူ..သွားဝိုင်းလုပ်ပေးလိုက်ဦး..မကောင်းဖူး”..””ဟုတ်အမေ..သားနက်ဖြန်..သွားလိုက်မယ်”..
မနက်ကျတော့..ဆရာမဆီသွား..နှုတ်ဆက်အနမ်းပေးပြီး..ဧည့်ခံမနေပဲ ပြန်လာမယ်”ပြောပြီး..ခရီးထွက်ခဲ့တယ်… အလှူမှာ ညအိပ် အလုပ်တွေဝိုင်းလုပ် နဲ့.အချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းကုန်သွားတယ်..ဒေါ်ကြည်ကိုလည်း..ဧည့်ခံနေ့မနေတော့ဖူး..ကြိုပြန်နှင့်မယ်ပြော…ဒေါကြည်ကလည်း..ဆရာမ.အဆင်ပြေရဲ့ လား…တို့လည်းဧည့်ခံညထိအိပ်ပြီး..နောက်နေ့မှပြန်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း..ပြောပြီး..ဧည့်ခံမနက်ပြန်လာခဲ့တယ်..အိမ်မှာခဏနားပြီး..ဆရာမ ဆီ..တန်းသွားတော့တာပဲ…”ဆရာမရယ်..လွမ်းလိုက်တာ…”..”တူတူပါပဲမင်းမင်းရယ်”တဲ့.အပြန်အလှန်..အနမ်းတွေပေးပြီး.အလွမ်းဖြေကြတာပေါ့..“”ည ကျရင်..လာခဲ့မယ်နော်..ဒေါ်ကြည့်တို့က.နက်ဖြန်..ပြန်လာမယ်တဲ့”..ဆရာမကလည်း..ဒေါ်ကြည်တို့လာရင်..ပြန်တော့မှာဆိုတော့..ညကျရင်..အားလုံး အတိုးချ …ချစ်ကြမယ်နော်.”..”အင်းပါ..အရမ်းပိုတယ်နော်” “မပိုပါဘူး..လိုတောင်လိုသေးတယ်.တာ့တာနော်..မ”ဆိုပြီး..ပြန်လာခဲ့တယ်…….
“”မ..မ..”..”လာလေ..မောင်..”.“မောင့်ကိုမျှော်နေတာ…”မောင်လည်း..အရမ်းလာချင်နေတာ..အမေတို့အိပ်တဲ့အထိ..စောင့်နေရလို.”..လာပါ..မရယ်..အခန်း ထဲသွားရအောင်” အခန်းရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ..နို့ကို.အားနဲ့.ညစ်လိုက်တာ..”အ”…”မောင်ကလည်း..အရမ်းပဲ.””ချစ်ချင်နေတာကိုဗျ..မ..ဘော်လီမဝတ်ထား ဖူးလား..အတွင်းခံရော…မဝတ်ထားဖူးလား…” ”မဝတ်ထားဖူးလေ..မောင်လာရင်..ချွတ်မှာပဲဟာကို”..”ပိုချစ်သွာပြီ”..ခု..အကုန်ချွတ်လိုက်နော်မ.” အချိန်ဆွဲ မနေပဲ..ပါးလေးကိုနမ်း..နားရွက်နမ်း..လည်တိုင်နမ်း..နှုတ်ခမ်းစုပ်ပြီး..နို့သီးခေါင်းတွေကို နှစ်ဖက်စလုံးချေပေးနေတယ်….မလည်း…”တဟင်းဟင်း..”ဖြစ်နေ ပြီ…ကုတင်ပေါ်အသာလေးလှဲပြီး.နို့တဖက်ကိုစုပ်..တဖက်ကိုချေ..ပြီး..လက်တဖက်က..ဝမ်းဗိုက်သားလေးတွေကို..ပွတ်ပေးနေတယ်..နို့စို့ရာက နေ..ဝမ်းဗိုက်ကို..လျှာနဲ့ယက်..ချက်တိုင်လေးကို..လျှာနဲ့ထိုးမွှေ..လုပ်တော့..ဆရာမတွန့်လိမ်နေပြီလေ..အောက်ကို..ထပ်ဆင်းသွားပြီး..ဆီးခုံလေးကိုနမ်း… အဖုတ်ပတ်လည်နမ်း..ပေါင်နဲ့အဖုတ်ကြားနမ်းနဲ့..ဆရာမက ကျတော့ခေါင်းကိုင်ပြီး..သူအဖုတ်ဆီ..ပို့နေတယ်..ဆရာမ..အနမ်းခံချင်နေပြီဆို..ပေါ်လွင်နေပြီ လေ..ကျတော်လည်း..သူတည့်ပေးသည့်အတိုင်း..စနမ်းပါတော့တယ်…စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးကို..လျှာနဲ့ကလော်ထိုးလိုက်..စုပ်လိုက်နဲ့လုပ်နေ တာ..”’အိုး..အိုး..အင်းအင်း..ဟဟ..ကျွတ်.ကျွတ်..မောင်ရယ်..ဟင်းဟင်း…”ညီးသံတွေထွက်နေတုန်း..လျှာကို အပြားလိုက်..ဆရာမစောက်ပတ် ကို..အထက်အောက်..ယက်ပေးလိုက်..စောက်စိကို..လျှာနဲ့ကလော်ထိုးလိုက်..တခါတခါ..စောက်စိကို စုပ်လိုက်နဲ့..ဆရာမခဗျာ..”’တအင်းအင်း…တအား အား”နဲ့.လိမ်ကောက်နေတာပဲ..ကျတော်လည်း..ဆရာမစောက်ပတ်ကို..နမ်းတာ..မရပ်သေးပဲ..တင်ပါးကိုမလိုက်ပြီး..စအိုကနေ..စောက်ပတ်ကြာလေး ကို..လျှာနဲ့ယက်ပေးလိုက်တယ်.. “”ဟင်း.ဟင်း..အားအား..အိုးအိုး..ကျွတ်ကျွတ်..မောင်ရယ်..မနေတက်တော့ဘူး….မောင်ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲ ကွာ…အား..အ.ား. မ..ကိုလုပ်ပေးတော့..မ..အရမ်းအလိုးခံချင်နေပြီ..လိုးပေးပါတော့…
အီး..အီး..အား.အား..ကောင်လိုက်တာ..မောင်ရယ်…တော်ပါတော့..အဟင့်..ဟင့်..ဟင့်..အ..အ…ယားတယ်…ယားတယ်..အဟင့်. ဒုက္ခပါပဲ….အဟင့်… ထွက်ကုန်ပြီ..ဟင့်..အဟင့်.” ဆရာမက..ကျတော့မျက်နှာမှာစောက်ရည်တွေ.ပေမှာစိုး၍ဆွဲဖယ်ပေမယ့်..အပြစ်လိုက်..အခဲလိုက်..စောက်ရည်တွေကို..လျှာ နဲ့သိမ်း..မြိုချပြလိုက်ပါတယ်…”ကွယ်..ဒီလောက်မလုပ်ပါနဲ့..မောင်ရယ်…မ.ကို.လိုးပေးပါတော့နော်..” ”မောင်းလိုးတော့မယ်နော်..မ”..”အင်း”မတ်တက် ရပ်လိုက်ပြီ…စောက်စိထိပ်ကို..လီးထိပ်နဲ့သုံးခါလောက်ကလော်ထိုးပြီး..စောက်ပတ်ဝမှာ.တေ့ကာ..ထိုးထည့်လိုက်တာ..”ဗြစ်..ဗြစ်..အား..အီး..အဟင့် ဟင့်..အီး.ပြွတ်..ဘွတ်..”အသံတွေအရမ်းမည်တာပဲမောင်ရယ်.”..”ဒီလောက်တော့မည်တာပေါ့..မရဲ့..သဘာဝပဲဟာ..”အချက်နှစ်ဆယ်ကျော်လောက်ဆော င့်လိုးပြီးတော့..လီးထုတ်လိုက်ပြီး””မ..ဖင်ကုန်းပေး..””အင်း”..မဖင်ကုန်းတာနဲ့..ခါးကိုကိုင်..အားနဲ့ဆောင့်လိုး..ထည့်လိုက်တယ်..”အား..ဗြစ် ပြွတ်..ဘွတ်..ပြွတ်..ပစ်..ဒုတ်..အားအား.”ကျတော်ဆောင့်လိုးနေတုန်း..စအိုလေးကိုလည်း..ကလိပေးနေတယ်ခဏကြာတော့..မစောက်ရည်ပေနေတဲ့..လီး နဲ့..စအိုကို.တည့်ပြီးထိုးလိုက်တာ..”အား..နာတယ်..နာတယ်..အ..”ပြီးရင်မနာတော့ပါဘူး..မရယ်”ဆိုပြီး..ဆက်ဆောင့်နေလိုက် တယ်…”.အား..အီး..အူး..အမလေး..အားအား…ဆောင့်…ဆောင့်..ကောင်းလာပြီ…အိုး..အိုး..မောင်ရယ်..ဖင်ထဲတော့..မပြီးနဲ့နော်…မ.လေ..မောင်ရင်သွေး လိုချင်လို့ပါနော်…
အား..အင်း..ကျွတ်..အား..အမလေးးး”မ.အသံတွေကို.ကျတော့ကို..အမြန်ပြီးအောင်လှုပ်ဆော်နေသလိုပဲကျတော်လည်း..အရမ်းကောင်းနေပြီ….လီး ကို..ဖင်ထဲကချွတ်ပြီး..စောက်ပတ်ကို..ပြောင်းလိုးလိုက်တယ်ကျတော်လည်းပြီးချင်နေပြီလေ..”ဗြစ်..စိ..အား..ဟား..ဟင်း..ဟ င်းး..ဖောက်….ဖောက်..အား..ကျွတ်..ကျွတ်..မောင်ရယ်..ကောင်း..ကောင်းလိုက်တာ..အသည်းကိုခိုက်နေတာပဲ…”ကျတော့လီးကသန်မာသည် ထက်..သန်မာလာသည်..မ.ရဲ့စောက်ခေါင်းအတွင်းသားများကလည်း..ဖိသိပ်ကြပ်သိပ်စွာဆွဲထားသလိုဖြစ်နေတော့..မအောင့်နိုင်တော့ပဲ..သုတ်ရည်များ ကို..မ..စောက်ခေါင်းထဲ..ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်..ကျတော်လည်း…ခဏနားပြီး..ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်..နောက်၂ရက်လောက်ကြာတော့..ဆရာမ လည်း..ပြန်သွားတယ်။အဆက်အသွယ်လည်း..မရတော့ဘူး။.ကြာတာကတော့…ဆရာမကြည့်ပြာ..သူ့မိဘသဘောတူတဲ့သူနဲ့..လက်ထပ်ပြီး.ကိုယ်ဝန်ရှိနေ ပြီလို့ကြားပါတယ်…ဆရာမ.အလုပ်ကလည်းထွက်လိုက်ပြီးတဲ့။ဗိုက်ထဲက..ရင်သွေးလေးကတော့… #crd ပြီးပါပြီ
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဆရာမလေးကွညျပွာ